1. အရောင်းရုံးကို +86 0755-84550616 ကိုခေါ်ဆိုပါ။
2. အီးမေးလ် သို့မဟုတ် Whatsapp အရောင်းစာရေး။
3. Tin Order Form များကို အပြည့်အစုံဖြည့်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပေးပို့ပါ။sales@bylandcan.com ။
အကောင့်မတည်ထောင်ပါက T/T၊ Western Union၊ L/C သို့မဟုတ် ကြိုတင်စစ်ဆေးပါ။
Stock Tins အတွက် အနည်းဆုံး အမှာစာက ဘယ်လောက်လဲ။
၅၀၀ပုံနှိပ်ခြင်းမပြုဘဲ ရိုးရိုးဗူးများအတွက် ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းတစ်ခုစီ၏ ဘူးခွံများ အပြည့်အစုံ။
Custom Tin အတွက် အနည်းဆုံး အမှာစာက ဘယ်လောက်လဲ။
သံဖြူ၏ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မူတည်၍ အရေအတွက်အပိုင်းသည် 5,000 မှ 25,000 ကျပ်ဖြစ်သည်။ကိရိယာအသစ်လိုအပ်သော အရာများသည် ပိုကြီးသော အနည်းဆုံးနှင့် ကြာရှည်ခံချိန် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကြိုက်သံဖြူ စုံစမ်းမေးမြန်းချက်ကို ဖြည့်ပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အနည်းဆုံး အမှာစာများအတွက် တိကျသော အချက်အလက်အတွက် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကို ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။သင်၏ သီးခြားစုံစမ်းမေးမြန်းမှုအသေးစိတ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်ဖြင့် စိတ်ကြိုက်ဗူးကို လိုချင်ပါသည်။ဤအရာသည် မြေယာမှ ပေးစွမ်းနိုင်သော အရာဖြစ်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့။မြေယာဖြင့် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော6ရောင်စုံပုံနှိပ်လိုင်းကို အသုံးပြု၍ သတ္တု၊ အိမ်တွင်းရှိ စိတ်ကြိုက်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပုံနှိပ်နိုင်သည်။အဆင့်များမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများကို လမ်းညွှန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသော အနုပညာဝန်ဆောင်မှုများနှင့် Prepress ဌာနတစ်ခုရှိသည်။ကျွန်ုပ်တို့တွင် သေးငယ်သောပမာဏအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်း စွမ်းရည်များလည်း ရှိပါသည်။
သံဖြူ၏တည်ဆောက်မှုပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်အမှာစာအတွက် ရှိပြီးသားကိရိယာဖြင့် အလွယ်တကူ အဝိုင်း သို့မဟုတ် ဖန်စီပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော သံဘူးအများစု၏ အမြင့်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ချောမွေ့မှုမရှိသော သို့မဟုတ် ရေးဆွဲထားသော သံဘူးများသည် အရွယ်အစား ချိန်ညှိမှုအတွက် ကိရိယာအသစ် လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာများကို ပေးစွမ်းမည့် နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲတစေ ဆန်းသစ်တီထွင်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား သံဖြူကို လိုချင်ပါသည်။Byland သည် 100% စိတ်ကြိုက် သံဖြူအရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသလား။
Byland Can ၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့သည် ပြည်တွင်းစက်ရုံအတွက် ပုံသဏ္ဍာန်အသစ်နှင့် အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် လိုအပ်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အချိန်ပေး၍ ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ဖောက်သည်များအတွက် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သောအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ အဆောက်အဦများမှ ပစ္စည်းအသစ်များကို အရင်းအမြစ်အဖြစ် Land Can မှ အကဲဖြတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအတွင်း ပေးဆောင်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကို ဆုံးဖြတ်ရန် ပရောဂျက်ကို အကဲဖြတ်ပါမည်။
စိတ်ကြိုက် သံဘူးအတွက် သင့်စံခဲချိန်က ဘယ်လောက်လဲ။
ရှိပြီးသားကိရိယာများနှင့်သင်၏အနုပညာလက်ရာနှင့်အတူ 3-5 ပတ်ကြာ။အယူအဆမှ ပြီးမြောက်သည်အထိ ခေါင်မိုးတစ်ခုတည်းအောက်တွင် လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်အပြင် လိုက်လျောညီထွေရှိပြီး အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
အားလပ်ရက်များအတွက် ကျွန်ုပ်၏ စိတ်ကြိုက်ပုံးများ ရရှိမည်ကို သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်သည် မည်မျှစောစီးစွာ မှာကြားရမည်နည်း။
အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုတင်စီစဉ်ထားရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ဆက်သွယ်ရေးက အဓိကပါ။စိတ်ကြိုက်အော်ဒါအတွက် သတ်မှတ်ရက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်အား အချိန်ဘောင်ကို အသိပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ပေးပို့သည့်နေ့မှစ၍ ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဝယ်ယူမှုအမှာစာလက်ခံရရှိမှု၊ အနုပညာလက်ရာနှင့် အထောက်အထားအတည်ပြုချက်အတွက် အချိန်ဇယားကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်ပရောဂျက်အားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ အပြောင်းအလဲများသည် သင့်မှာယူမှု၏နောက်ဆုံးတင်ပို့မှုကို နှောင့်နှေးစေနိုင်သည်။လက်ရှိအချိန်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အီးမေးလ်ပို့ပါ သို့မဟုတ် 0755-84550616 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့် စကားပြောပါ။
သံဘူးများသည် အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များအတွက် ဘေးကင်းပါသလား။ဘူးခွံများသည် အစားအစာ ဘေးကင်းကြောင်း ဖော်ပြသည့် စာတစ်စောင်ကို ရနိုင်ပါသလား။
အလှဆင်ဗူးများသည် အစားအသောက်ထုတ်ကုန်များအတွက် လက်ခံထားသော ထုပ်ပိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။အက်စစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ရေကိုအခြေခံသည့် ထိုထုတ်ကုန်များအတွက် အတွင်းပိုင်းအလွှာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် FDA အသိအမှတ်ပြု မှင်များနှင့် အပေါ်ယံအလွှာများကို အသုံးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပေးသွင်းသူများထံမှ စာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့အား Fortune 500 ဖောက်သည်အများအပြားမှ နှစ်စဉ်စစ်ဆေးပြီး အစားအသောက်နှင့် ထိတွေ့ထုပ်ပိုးထုတ်လုပ်သူများအတွက် မြင့်မားသောစံနှုန်းများနှင့်ပြည့်မီကြောင်း အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆောက်အဦအားလုံးသည် ဘေးကင်းသော အရည်အသွေး အစားအစာဌာနမှ SQF2 လက်မှတ်ရရှိထားသည်။
စတော့အိတ်များ အတွက် သင်၏ ခဲချိန်သည် အဘယ်နည်း။
သင့်မှာယူသည့်အချိန်တွင် ရာသီနှင့်ရရှိနိုင်မှုပေါ်မူတည်၍ 2-3 ပတ်ကြာသည်။အထူးဖော်ပြထားသည့်အရာအားလုံးအတွက် စစ်မှန်သော တစ်နှစ်ပတ်လုံး စတော့ခ်အစီအစဉ်ကို ကတိကဝတ်ပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ထက် ပိုကောင်းလေ့ရှိသည်။
နွေဦးပွဲတော်အတွက် ကျွန်ုပ်၏အမှာစာများကို အချိန်မီရရှိပြီး ဗူးခွံများအားလုံးကို ရရှိရန်သေချာစေရန် ကျွန်ုပ်သည် မည်မျှစောစီးစွာ မှာကြားရမည်နည်း။
ဆောင်းရာသီ အားလပ်ရက်များတွင် မှာယူရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။သို့သော် နွေရာသီကုန်တွင် မှာယူခြင်းမရှိပါက၊ ၎င်းသည် သင်၏ဘူးခွံများကို ရရှိမည်မဟုတ်ဟု မဆိုလိုပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြမ်းပြင်စတော့ကို အဆက်မပြတ်ဖြည့်တင်းရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။တိကျသောစာရင်းအချက်အလက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ပို့ပါ သို့မဟုတ် 0755-84550616 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
ဘယ်လိုသင်္ဘောနဲ့ သယ်ယူခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ။
Byland သည် Common Carriers (LTL / TL) မှတဆင့် ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များတောင်းဆိုသည့်အခါ UPS၊ DHL နှင့် FEDEX တို့မှလည်း ပို့ဆောင်ပေးသော်လည်း ၎င်းသည် အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ပါ။
Byland Can Co. သည် လက်ရှိ ပို့ဆောင်မှုအချိန်ဇယားကြောင့် နောက်နေ့တွင် ပုံမှန်အတိုင်း တင်ပို့နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။Byland Can ၏ပုံမှန်အချိန်သည်2ပတ်ဖြစ်သည်။စတော့ရရှိနိုင်ပြီး ပို့ဆောင်မှုအချိန်ဇယားကို ခွင့်ပြုပါက ဖြစ်နိုင်လျှင် အမြန်ဆုံး တင်ပို့နိုင်ရန် ကြိုးစားပါမည်။အချို့ကိစ္စများတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြန့်ဖြူးသူများသည် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တင်ပို့နိုင်သည်။
ဘူးခွံတွေ ပျက်စီးနေတယ်။ထုတ်လုပ်မှု ပျက်စီးပုံပေါ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
ထုတ်လုပ်မှုတွင် ချို့ယွင်းချက်ရှိသည်ဟု ခံစားရသော သံဗူးများကို လက်ခံရရှိပါက အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။
1. သင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကို ဖုန်းဆက်ပါ။
2. သံဘူးနမူနာများ ပေးပို့ပါ။၎င်းတို့ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ QA ဌာနသို့ ပြသပါမည်။
3. ကျွန်ုပ်တို့၏ QA ဌာနသည် ပျက်စီးမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် သင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှ တွေ့ရှိချက်များကို ဆွေးနွေးရန် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါမည်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု ပျက်စီးနေပုံပေါ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်သင့်သနည်း။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရာတွင် ထိခိုက်မှုရှိသည်ဟု ခံစားရသော သံဘူးများကို လက်ခံရရှိပါက အောက်ပါအဆင့်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။
1. ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအားလုံးကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဘီလ်တွင် တိုက်ရိုက် သို့မဟုတ် UPS သို့မဟုတ် FEDEX ဖောင်တွင် ပျက်စီးမှုပုံစံတွင် မှတ်သားပါ။အကယ်၍ သင်သည် ဤမှတ်စုများကို မရေးပါက ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအတွက် အရေးဆိုရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
2. တောင်းဆိုချက်တစ်ခုတင်ရန် ပို့ဆောင်ပေးသူအား ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။၎င်းတို့သည် သင့်အား တောင်းဆိုမှုပုံစံ၏ မိတ္တူတစ်စောင်ကို ဖြည့်စွက်ကာ ဖက်စ်ပြန်ပေးပို့သင့်သည်။
ငါ မှာထားတဲ့ ဗူးတွေ အကုန် မရဘူး။ကျန်တာကို နောက်မှ ပို့မှာလား။
နှစ်၏အချိန်ပေါ်မူတည်၍ သင်မှာယူထားသော ဒီဇိုင်းများ သို့မဟုတ် အရွယ်အစားများအားလုံး စတော့တွင် ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် မပါဝင်နိုင်ပါ။သင့်မှာယူမှုတွင် ဘူးများအားလုံးကို မရရှိခဲ့ပါက၊
1. ဘူးခွံများကို ပြန်ယူထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ထုပ်ပိုးမှုစာရင်းကို စစ်ဆေးပါ။
2.ပျောက်ဆုံးနေသောပစ္စည်းများကို ပြန်လည်မှာယူပါက၊ ကျန်ရှိသော ဘူးခွံများကို ရရှိပြီးသည်နှင့် သင့်ထံသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။နောက်ကျောမှာယူထားသည့် ဘူးခွံများကို မရယူလိုပါက လက်ကျန်ငွေကို ပယ်ဖျက်ရန် သင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဖုန်းဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
3. ထုပ်ပိုးမှုစာရင်းတွင် အဆိုပါပစ္စည်းများကို ပြန်လည်မှာယူထားခြင်းကို မပြပါက၊ သင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ထံ ဖုန်းဆက်ပြီး သင့်အမှာစာအပြည့်အစုံကို သင်ဘာကြောင့်မရရှိခဲ့သည်ကို သိရှိရန် ဝမ်းမြောက်မိပါလိမ့်မည်။
ကောက်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ကြိုတင်ပေးချေထားသော ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးက မည်သည့်အရာက ပိုကောင်းသနည်း။
အောက်ဖော်ပြပါများသည် ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုနှင့် ပို့ဆောင်မှုစုဆောင်းခြင်းကြား ကွာခြားချက်များဖြစ်သည်။
1. ပို့ဆောင်ခများ စုဆောင်းပါ- ကုန်စည်ပို့ဆောင်သည့်အခါ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် ပေးချေရမည်ဖြစ်သည်။သင်၏အမှာစာကို မလွှင့်မီ ယာဉ်မောင်းအား စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
2. ကြိုတင်ပေးချေထားသော ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု- Byland Can ကုမ္ပဏီသည် သင့်ပြေစာတွင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေါင်းထည့်ပါမည်။မှာယူမှုအတွက် ကိုင်တွယ်ခ ကောက်ခံမှုရှိပါသည်။
3. Byland Can သည် ခြွင်းချက်မရှိဘဲ Collect နှင့် Pre-paid Freight FOB Factory နှစ်မျိုးလုံးကို တင်ပို့နိုင်သည်။
FOB ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုတာလဲ။
FOB ဆိုသည်မှာ Freight On Board ကိုဆိုလိုသည်။ဆိုလိုသည်မှာ FOB ပွိုင့်မှ ထွက်ခွာချိန်တွင် ကုန်စည်သည် ဖောက်သည်၏ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာသည်။ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှု ပျက်စီးမှုအတွက် တောင်းဆိုမှုအားလုံးသည် ခြွင်းချက်မရှိဘဲ ပို့ဆောင်ပေးသည့် လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
သင် COD ပို့ပါသလား။
ကုန်းလမ်းဖြင့် COD မပို့ပါ။
စိတ်ကြိုက် Tin Box, Tin Cosmetic Containers, စီဒီ အယ်လ်ဘမ် ဖြစ်ရပ်မှန်, လက်ဖက်ခြောက်သေတ္တာ, အဖုံးပါသော သတ္တုသိုလှောင်အိတ်, စီဒီအစွပ်အလွတ်များ,